24 พ.ค. 2563 - 19:12 น.
ဟောင်ကောင်မှာ တရုတ်ရဲ့ လုံခြုံရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ စီစဉ် တာကို ကန့်ကွက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီး၊ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရဲတွေကြားမှာ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက တရုတ်ရဲ့ လုံခြုံရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမယ့် အစီအစဉ် ကိုကမ္ဘာ တဝန်းမှာ ရှိတဲ့ ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေးသမား ၂၀၀ လောက်က ပေါင်းစည်းပြီး ကန့်ကွက်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ တရုတ်ဟာ ဟောင်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ကို ထိခိုက်မယ်၊ ဟောင်ကောင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ငွေကြေး လုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို တရုတ်ကတော့ ငြင်းပယ်ပါတယ်။ ဒါတွေက တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ကို နှောင့်ယှက်မှုတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်လည် တုံ့ပြန်ပါတယ်။
တရုတ်လိုလားတဲ့ ဟောင်ကောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကယ်ရီ လမ်း ကလည်း လုံခြုံရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမှု ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံထားပါတယ်။ ဟောင်ကောင် ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကတော့ အပြောင်းအလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေ ဟာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာတန်းတွေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေ နဲ့ ချီတက်ခဲ့
ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကော့စ်ဝေး ကမ်းခြေနဲ့ ဝမ်ချိုင်း ခရိုင်ကနေပြီး ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာတန်းတွေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေ နဲ့ ချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုံခြုံရေး ဥပဒေကြမ်းကြောင့် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ပုံနှိပ်ဖော်ပြမှုတွေကြောင့် လူတွေဟာ ရာဇဝတ်သားတွေ ဖြစ်သွား နိုင်တယ်လို့ အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် ဗင်းဆင့်က AFP သတင်းဌာနကို ပြောဆို ပါတယ်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီက အတည်မပြုရသေးတဲ့ ဥပဒေကြမ်းထဲမှာ ဟောင်ကောင်ရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေ ကို တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ခွဲ တစ်ရပ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဟောင်ကောင်မှာ လိုအပ်ရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါဟာ တရုတ်ရဲ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ဟောင်ကောင်မှာ အခြေစိုက်ခွင့်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ရဲ့ နဂိုရှိပြီးသား ရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွဲဖက်နိုင်ခွင့်လည်း ရှိသွားပါပြီ။
ဒီတပတ် အစောပိုင်းတုန်းကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယိုက ဟောင်ကောင် လုံခြုံရေး ဥပဒေကြမ်းဟာ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူး တာပဲလို့ ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယူကေ၊ သြစတြေးလျ နဲ့ ကနေဒါ တို့ကလည်း ဒီအပေါ်မှာ စိုးရိမ်ကြောင်း အသီးသီး ပြောဆို ကြပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ကို ကုန်သွယ်ရေး နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာ အထူးအခွင့်အရေးတွေ ဆက်ပေးမလား ဆိုတာကိုလည်း အမေရိကန်တို့ဘက်က စဥ်းစားနေပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ကလည်း ဒီဥပဒေကြမ်း ကို အတည်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်မယ်လို့ ပြောပေမယ့် အသေးစိတ်ကိုတော့ ထုတ်မပြောပါဘူး။
ဟောင်ကောင်အရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ တရုတ်အစိုးရ ကို မယုံကြည်ရဘူး ဆိုရင် တခြား အရေး ကိစ္စတွေမှာလည်း တရုတ်ရဲ့ စကားကို လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်း လိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ ကြေငြာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စီးပွားရေး အရ အရေးပါပြီး၊ တစိတ်တပိုင်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ဟောင်ကောင်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဗြိတိသျှ တို့ဆီကနေ လွှဲပြောင်း ယူခဲ့ချိန်က စပြီး ဒီလို ဥပဒေမျိုး ပြဌာန်းဖို့ တရုတ်ဘက်က လိုလားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဟောင်ကောင်လူထု အကြားမှာ ရေပန်းမစားလို့ တစ်ခါမှ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်း ကလည်း တရုတ် အစိုးရ က ကြိုးစား ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟောင်ကောင်က လမ်းမ တွေပေါ်မှာ လူငါးသိန်းလောက်က ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့လို့ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
နောင်အခါမှာ ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲတွေကို တားဆီးနိုင်အောင်၊ ရပ်တန့်နိုင်အောင်၊ အပြစ်ပေးနိုင်အောင် လုံခြုံရေး ဥပဒေ လိုအပ်တယ်လို့ တရုတ်အစိုးက ခုခံပြောဆိုထားပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး အခု စက်တင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် ဟောင်ကောင် ဥပဒေပြု အမတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရင် နှစ်က အတိုင်း ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ အမတ်အများစု အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် တရုတ်ရဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေကို ကန့်ကွက်မှု တွေ ပိုများလာမှာ ကို ဘေဂျင်း ဘက်က စိုးရိမ်နေတာပါ။
ဒီလုံခြုံရေး ဥပဒေကြမ်းကို ဟောင်ကောင်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်းဖို့ တရုတ်က လွှတ်တော်ကနေ အတည်ပြုတဲ့နည်း ဒါမှမဟုတ် အမိန့်ဒီဂရီနဲ့ ကြိုးစားလာနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်မှာ ကွန်မြူနစ် ပါတီ ညီလာခံ ကျင်းပနေပြီး လာမယ့်မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဒီကိစ္စကို မဲပေးကြဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ မဲပေးပြီးရင် ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ က နောက်ဆုံး အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ ဇွန်လ ကုန်ပိုင်းမှာ ဥပဒေ အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းသွားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာ ကြားက ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲ